Sharciga degganaanshaha | Skatteverket
» Yaa dalban karo kaarka aqoonsiga?
» Sharciga degganaanshaha
Laga bilaabo 1 oktoobar 2010, qofkii sharciga degganaanshaha Iswiidhishka ah haysto, laakiin aanan ku caddeyn karin qofka uu yahay oo aanan keeni karin dokumenti ansaxan, wuxuu u oggolaan karaa Hey’adda canshuuraha in ay isbarbardhigaan warbixinta khuseeyo qofka oo ay haystaan Laanta socdaalka iyo warbixinta khuseeyo qofka oo uu keensaday qofku.
Warbixinta aan isbarbardhigeyno waa magaca qofka, dhirirka, masawirka, saxiixa, qoraalaha safarka iyo caddeynta sharciga degganaanshaha. Sababtaas bay u fiicantahay inaa soo wada qaadatid baasaboorkaada iyo caddeyntaada sharciga degganaanshaha. Haddii aadan heysan baasaboor waxaa kaliya soo qaadataa caddeyntaada sharciga degganaanshaha. Haddii aad rabtid in aad habkaan ku xaqiijisid qofka aad tahay, waa in aad noo sheegtaa adiga xilliga aad dalbaneysid kaarka aqoonsiga.